Shiinaha qeybiye Button jumlada Shirkado,-saareyaal - GRX DARYEELKA (HONG KONG) CO., LTD.
Hoyga >Alaabta >Qalabka badhanka
I-badhanka qolofka hoose
Qolofta hoose ee badhan waxay ka samaysan tahay bir bir ah iyo naxaas. Shirkaddu waxay dhaaftay ISO9001: shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee 2008. Waxay leedahay tiro shatiyeedyo ah. Dhammaan alaabooyinka waxaa lagu tijaabiyay SGS oo la dhigay suuqa kadib markii ay ka gudbeen imtixaanka. Tayada badeecada waa la soo dhoofiyaa. Nidaamka maareynta, hagaajinta joogtada ah ee qalabka kala duwan iyo agabyada softiweer, oo ku dadaala sidii ay suuqa ugu qaban lahaayeen tayo.
Ciddiyaha aluminium waxaa laga sameeyay aluminium. Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001: 2008. Waxay leedahay tiro shatiyeedyo ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay imtixaanka SGS oo la geliyay suuqa kadib markii ay ka gudbeen imtixaanka. Nidaam maamul tayo leh oo badeecadeed ayaa la soo saaray. In kor loo qaado qalabka kala duwan ee qalabka iyo softiweerka, laguna dadaalo in suuqa lagu qabsado tayo.
Xuddunta cinjirkaani waxay ka samaysan tahay caag. Shirkaddu waxay dhaaftay ISO9001: shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee 2008. Waxay leedahay tiro shatiyeedyo ah. Dhammaan alaabooyinka waxaa lagu tijaabiyay SGS oo la geliyay suuqa kadib markii ay ka gudbeen imtixaanka. Nidaam maamul tayo leh oo badeecadeed ayaa la soo saaray. In kor loo qaado qalabka kala duwan ee qalabka iyo softiweerka, laguna dadaalo in suuqa lagu qabsado tayo.